August 2019 - Page 5 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
August 9, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haweenaydii is-qarxisay oo dishay duqii Muqdisho iyo lix qof oo kale ayaa ahayd indhoolad, taasoo ka shaqayn jirtay dowladda hoose ee Muqdisho, wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidaa ku sheegtay war-saxaafadeed maanta […]
August 8, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyaha cusub ee taliska Mareykanka ee Afrika ayaa Arbacadii yimid Soomaaliya, kaasoo noqonaya safarkiisii ugu horeeyay ee uu ku tago qaarada Afrika tan iyo markii uu xafiiska qabtay. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka […]
August 7, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarinta Qorshaha Horumarinta Puntland ee 4-aad 2020 -2024 ayaa maanta oo Arbaco ah ka furmay caasimada Garoowe. Masuuliyiin katirsan dowladda oo uu hoggaaminayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka qaybgalay kulanka oo looga […]
August 6, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah deegaano kuyaala gobolka Shabellaha Hoose kala wareegay maleeshiyada Al-Shabaab. Ciidanka ayaa la wareegay deegaanka Ow-dhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu warbaahinta dowladda u […]
August 5, 2019 Puntland Mirror 0
Somalian authorities executed two al-Shabaab militants who were convicted for a December attack that killed at least 13 people in the capital, Mogadishu. The men “were executed by firing squad on Monday morning,” Chairman of […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa beenisay warbixin sheegaysa in diyaarada Daalo Airline laga mamnuucay garoomada Puntland. “Wasaarada Duulista Hawadda iyo Garoomadda ee Dowladda Puntland, waxa ay cadaynaysaa in aan waxba ka jirin warbixinta lagu sheegay in […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah dil toogasho ah ku fulisay labo xubnood oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha maxkamada. Labada xubnood ayaa lagu helay in ay ku lug […]
August 4, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqii Muqdisho ayaa maanta oo Axad ah lagu aasay magaalada Muqdisho. Diyaarad siday maydka Cabdirixmaan Cumar Cusmaan ayaa subaxnimadii hore ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Masuuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Miinada wadada lagu aaso ayaa lala beegsaday gaariga wasiirkii hore ee qorshaynta Puntland Shire Xaaji Faarax gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso maanta oo Axad ah. Shire Xaaji oo gaariga la socday ayaan wax dhibaato […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqii maagalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay xafiiskiisa, sida ay sheegeen masuuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya maanta oo Khamiis ah. Waxa uu […]
Tirada dadka ku barakacay colaada ayaa gaartay meeshii ugu saraysay oo la diiwaangasho, sida ay sheegtay haayada Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga. Waxaa lagu qiyaasay 65.3 milyan oo qof in ay midkood yihiin, qaxooti, nabadgalyo [...]